တရုတ်အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက် 3SZ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ |Zhengheng
အလူမီနီယံ အင်ဂျင် သံကြိုး...
မော်ဒယ်- Toyota 3SZ
လျှောက်လွှာပုံစံ- Myvi၊ Alza
အနည်းဆုံး အော်ဒါအရေအတွက်- ညှိနှိုင်းမှု
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးမှု + ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ;195cm * 215cm 10 ခု/ပုံး
ပို့ဆောင်ချိန်: 35 ~ 60 အလုပ်လုပ်ရက်
ငွေပေးချေမှု- t/T၊ L/C
ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်: တစ်နှစ်လျှင် 300000 ကျပ်
သွန်းသံအင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်၊ပစ္စည်း FC250 အလွတ်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ- သွန်းသံ FC250
ဆလင်ဒါအချင်း * လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) : 72
Zhengheng Power မှထုတ်လုပ်သော ဆလင်ဒါလေးလုံးတပ်သံအင်ဂျင်တုံး 3SZ သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Toyota Motor ၏ Daihatsu ကုမ္ပဏီအတွက် စိတ်ကြိုက်ဆလင်ဒါလေးလုံးတပ်အင်ဂျင်တုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဖြတ်သန်းနှုန်းမြင့်မားပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက ဂျပန်နှင့် မလေးရှားသို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။ယခုအထိ
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ သွန်းသံအင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ဆလင်ဒါတုံးပေါင်း သန်း 20 ကျော်၊ လက်ကားအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး အင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးကို ပူးတွဲသုတေသနပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအရ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရလဒ်များရှိသည်။ အရောင်းဝန်ဆောင်မှု။သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စောင့်မျှော်ပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း -> Mold -> Modeling -> smelting -> casting -> shot blasting -> Cleaning -> Blank inspection -> Machining -> inspection -> packaging delivery
1. Zhengheng Power သည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး ခိုင်မာသော ဆလင်ဒါဘလောက်ဒေတာဘေ့စ်ဖြင့် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် သွန်းသံအင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။
2. ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းဝန်ထမ်းများရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းများစွာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
3. OEM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို အာရုံစိုက်ပါ၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အရည်အသွေးကောင်းနှင့် အပြိုင်အဆိုင်ဆုံးစျေးနှုန်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
4. နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် IATF 16949 စနစ်ထောက်ခံချက်၊ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော ထုတ်လုပ်မှုကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။
5. ခိုင်မာသောနည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုပေးရန်၊ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းမှ စက်ယန္တရားအထိ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဖောက်သည်အသစ်၏ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အောင်မြင်မှုနှုန်း 100% သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
6. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှို၊ သွန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းမှ တစ်နေရာတည်းတွင် အချောထည်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးသည့် သတ္တုပုံသွင်းစက်ရုံနှင့် စက်လည်ပတ်သည့် စက်ရုံတစ်ခုရှိသည်။
7. 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 တန်သေသွန်းစက်, အလူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. မူရင်းထုပ်ပိုးမှု- 1PC/piece၊ 10 pieces/box (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍ အရေအတွက်);ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း + ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ
2. အထူးထုပ်ပိုးမှု- အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် နွေးထွေးစွာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
1. ရှည်လျားသောရေကြောင်းပို့ဆောင်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာအမြန်ကြောင်းသေချာစေရန် Standard ထုပ်ပိုးမှု၊ ခိုင်ခံ့သောထုပ်ပိုးမှု။
2. အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ခိုင်ခံ့သောထုပ်ပိုးမှုသေချာစေရန် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းများကို ပြင်ဆင်ရန် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရှိသည်။
3. ဝယ်ယူသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောအေဂျင်စီ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသင်္ဘောအေဂျင်စီကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
1. Cylinder block spot- စာရင်းရှိလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-20 ရက်အတွင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
2.OEM ထုတ်ကုန်များ: တရားဝင်ပုံများရရှိပြီးနောက် 30-65 ရက်အတွင်းနမူနာများပေးပို့ပါ။(တိကျသောထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်.)
1. OEM ထုတ်လုပ်မှုကို လက်ခံပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို လျင်မြန်တိကျစွာ ပေးပို့ပါ။
3. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့နှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, သင့်လက်ဖို့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုသေချာစေရန်။
4. အစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် သင့်အားကူညီရန်အတွက် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ယ်ယူခြင်း။
1. မေး- ဘယ်လူမီနီယမ်သွန်းလုပ်ခြင်းကို သင်ထုတ်လုပ်နိုင်သလဲ။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့တွင် 200 ~ 6000 တန်သေတ္တာများရှိသည်၊ ငါတို့သည်လူမီနီယံလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
2. မေး- အလူမီနီယံသွန်းလုပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသနည်း။
အဖြေ: ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ထုတ်ကုန်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိုအပ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့တွင်နိမ့်သောဖိအား၊ မြင့်မားသောဖိအား၊ ဆွဲငင်အားထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။
1. မေး- ထုတ်ကုန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ လိုဂိုကို ထည့်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ စိတ်ကြိုက်လိုဂို၊ OEM ထုတ်လုပ်မှုကို ကြိုဆိုပါတယ်။
2. မေး- အစိတ်အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံများကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပန်းချီကားများကို နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါ။
3. မေး- နောက်တစ်ကြိမ်မှာမှိုကြေးကို ထပ်ပေးရမှာလား။
A: ၎င်းကို မှိုသက်တမ်းအတွင်း အသုံးမပြုပါ။မှိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်အရ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
4. မေး- သင့်ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကဘာလဲ။
A: T/T 50% စပေါ်ငွေ၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ 50%။ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အပြည့်ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဓာတ်ပုံများကို သင့်အား ပေးပို့ပါမည်။
5. မေး- ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သနည်း။
အဖြေ- 1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးရှိစေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို လေးစားပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေများအဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့နှင့် ရိုးသားစွာ စီးပွားရေးလုပ်ကြပြီး မည်သည့်နေရာမှ မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြသည်။
ယခင်- OEM အကောင်းဆုံး Cnc Gearbox အိမ်ရာထုတ်လုပ်သူများ - အင်ဂျင်ဘလောက် 4G15T သွန်းသံပစ္စည်း - Zhengheng
နောက်တစ်ခု: အင်ဂျင်ဘလောက် 4G15T သံသွန်းပစ္စည်း
Engine Block Blank ပါ။
အင်ဂျင် စိတ်ကြိုက် ပိတ်ဆို့ခြင်း။
Engine Block ထုတ်လုပ်မှု
အင်ဂျင် Cylinder Block Blank
အင်ဂျင် Cylinder Block စိတ်ကြိုက်
အင်ဂျင်ဘလောက် 4G15T သံသွန်းပစ္စည်း